अक्षय कुमार आफ्नो छोरीको अनुहार किन लुकाउन चाहन्छन्, खुल्यो यस्तो रहस्य - Rising Dainik
March 15, 2021 March 15, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on अक्षय कुमार आफ्नो छोरीको अनुहार किन लुकाउन चाहन्छन्, खुल्यो यस्तो रहस्य
एजेन्सी । बलिउडमा सुशान्त राजपुतको नि’धन पछि परिवारवादको वहस सुरु भएको छ । फिल्मी क्षेत्रमा रहेका बुवाआमाका छोराछोरीले फिल्ममा चर्चा कमाउने तर फरक क्षेत्रवाट आएका कलाकारले अवसर नपाउने भएका कारण सुशान्तले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै वहस सुरु भएको हो । तर बलिउडका अर्का हस्ति अक्षय कुमार भने आफ्नो छोरीको अनुहार क्यामेराको सामुन्ने देखाउन चाहन्नन् ।
फिल्मी कलाकारको परिवार र उनको छोराछोरीको बारेमा सबैलाई चासो हुन्छ । करिना कपुर र सैफअलि खानका छोरा तैमुर सानै उमेरमा चर्चीत भएका छन् । उनको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुनछन् । तर अक्षयकुमार भने यो सबै कुरा भन्दा फरक छन् । उनी आफ्नो छोराछोरीका बारेमा बाहिर कुरा पनि गर्दैनन् र उनीहरुलाई क्यामेरा सामुन्ने पनि ल्याउँदैनन् ।
अक्षय कुमारका फिल्म पारिवारिक हुन्छन् । उनी फिल्ममा जस्तै निजि जिवनमा पनि आफ्नो ब्यक्तिगत जिवन र परिवारलाई लिएर निकै संवेदनशिल छन् । उनले आफ्नो छोरी नितारालाई कहिल्यै पनि क्यामेराको सामुन्ने ल्याउँदैनन् । उनी नितारालाई कलाकार बनोस् भन्ने द’वाव नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।
फिल्मी दुनिया र क्यामेराको सामुन्ने आएपछि हुने चर्चाले उनको छोरीलाई असर नहोस् भन्ने कुरामा निकै हो’सियार रहेका अक्षय छोरीले आफुले चाहेको काम गरोस भन्छन् । त्यसैले पनि उनी छोरी कलाकारनै बनोस् भन्ने इच्छा राख्दैनन् । जसका कारण उनी छोरीलाई फिल्मी दुनिया र क्यामेरावाट लुकाएर राखेका छन् । अहिले बच्चाबच्चीको अध्ययन गर्ने समय भएका कारण उनीहरुको समय खेल्न र अध्ययन गर्नमै वितोस् भन्ने चाहन्छन् ।
फिल्मी क्षेत्रमा फिल्मी क्षेत्रमा रहेका कलाकारका छोराछोरी पनि अधिकांश कलाकार नै बन्ने गरेका छन् । तर अक्षय भने फरक चाहन्छन् । उनी आफ्नो छोराछोरीले फरक क्षेत्र रोजुन् भन्ने इच्छा राख्छन् । फिल्मी क्षेत्रका कलाकारका छोराछोरी प्रति मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हुने कौतुहलतावाट उनी आफ्ना सन्तानलाई टाढा नै राख्न चाहन्छन् ।
उनी आफ्नो छोरा सर्वसाधारणका छोराछोरी जस्तै स्वतन्त्र भएर अध्ययन गरोस्, उसलाई स्टारको छोरी भन्ने अनुभव नहोस् । छोरीको बालापन नखोसियोस् भन्ने कुरामा उनी निकै सम्बेदनशिल छन् । उनी सर्वसाधारणको बालबालिकाले जस्तो जिवन आफ्नो छोरीले पनि साधारण तरिकामै विताओस् भन्ने चाहन्छन् ।
Breaking: ओली पक्ष र नेपाल पक्षको बार्ता सकियो , के भयो सहमति ?
आफ्नै श्रीमतिले श्रीमानलाई मा’र्न गुणडाहरु पठाएपछि ॥ काेठामा सुतेकाे बेला ३ जनाले स’मातेर यस्ताे ॥- हेर्नुस् भिडियो सहित
चर्चित फुटबलर म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा नि’धन
November 25, 2020 Ramash Kunwar
February 26, 2021 Ramash Kunwar
November 22, 2020 Ramash Kunwar
नेपालीले काँग्रेसले गर्यो यस्तो बोल्ड निर्णय, जनताले गर्न थाले वाहीवाही ! May 8, 2021
अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन पनि छैन, बिरामीहरु धमाधम पीपलको बोट मुनि बस्न बा’ध्य May 8, 2021
९ जना भारतिय नेपाल पसेर बच्चा चो र्दै गर्दा भेटेपछि रामधु ला ई ग रे ,आमा बुबाले सुनाए सन्सनीपूर्ण नालीबेली (भिडियो) May 7, 2021
सिन्धुलीमा कलिलो आठ बर्षिय बालकको को’रो’ना’का कारण उपचार गर्दा गर्दै दु’ख’द नि’ध’न May 7, 2021
माधव नेपाल र ओलीको सहमतिमै बादललाई टिकट दिएको खुलासा ,सबैलाई छक्काएर बादललाई जिताउने नेपालको यस्तो गोप्य तयारी , May 7, 2021